Know maara ihe ịzụ ahịa bụ? | ECommerce ozi ọma
Ọ bụ ngwaahịa ahaziri maka ọchụnta ego ọ bụla ma ọ bụ ọkachamara ọ bụla yana, ọkachasị, maka obere ụlọ ọrụ obere na ọkara, site na usoro a, nwere ike belata ọrụ nke ngalaba nchịkwa, outsource akaụntụ sitere na ire ahia na nchikota ha, ya na oganihu n’ubia ugwo nke akwukwo ego, ihe ndia nile gha akwanye uru, ikike kredit na ego nke ulo oru.
N’etiti uru dị na ịwe ngwaahịa a bụ ozi oge, nke emelitere na nke emelitere nke ndị ji ụgwọ, Mbelata ibu ọrụ nchịkwa ma ọ bụ na-eme ka ị nweta ego nke akaụntụ ndị ahịa, yana ndị ọzọ. N'aka nke ọzọ, enweghị nkọwa akọwapụtara nke ụlọ ọrụ ndị na-eji ngwaahịa ego a, kama ọ bụ ngwaahịa erere yana ọnọdụ ịkwụ ụgwọ ka enyere njedebe ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, enweghị ike ichefu na ọrụ ego a nwere ike ịbụ ihe ọzọ na ego nke ezigbo akụkụ nke ụlọ ahịa na azụmaahịa dị n'ịntanetị. Dabere n'ụdị usoro azụmahịa ha na-anọchi anya ya. Kedu nhọrọ ngwaahịa ngwaahịa ndị ọzọ na ụlọ akụ nke mkpa dị oke mkpa ma nwee ike ikpebi ọganiihu ma ọ bụ na arụghị ọrụ site ugbu a gawa. Ebe ọ bụ na anyị na-eche ihu ụdị doro anya nke chọrọ nghọta pụrụ iche n'akụkụ nke ndị ọrụ dijitalụ n'oge a.
1 Factoring: iche iche nke ụdị na ahịa
2 Olee otú ọrụ a si arụ ọrụ
3 Uru nke ngwaahịa a
4 Enweghi ike mkpuchi mkpuchi
5 Oringkwụ ụgwọ ihe
Factoring: iche iche nke ụdị na ahịa
Factoring abụghị a edo ngwaahịa, ma na Kama ọ na-enye dị iche iche ụdị dị ka ị ga-ahụ n'okpuru. Ebee ka odi iche-iche nke Ime ihe dabere na ọrụ ndị ịchọrọ ma ọ bụ onye ji ụgwọ na ajụjụ. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ha:
Ime ihe n’enweghi mgbagha, a modality awade ego, anya isi ụlọ ọrụ nke Ime ihe ihe ize ndụ nke insolvency nke ụgwọ. O doro anya, ọnụego na ọnọdụ a dị elu karịa.
Ime ihe na recourse, nke onye na-ere ahia na-ebute ihe ize ndụ nke insolvency, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ nke Ime ihe azaghị ụgwọ onye akwụghị ụgwọ. Moddị a dị iche iche n'ihi na ọ pụtaghị na ị ga-enweta ego.
Ime ihe site na mbupụ, mgbe a bịara n'ọrụ e ji ndị ji ụgwọ bi ná mba ọzọ. Ọ kachasị baa uru maka ụlọ ọrụ na-ebupụ ngwaahịa na SME ndị na-enweghị nnukwu akụrụngwa, ebe ọ bụ na ọ gụnyere ọrụ ịpụ apụ. Na Eziokwu mbupụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ire mba, ebe ọ bụ na naanị ihe ị ga - eme bụ iziga ngwongwo ahụ, ndị ụlọ ọrụ na - ebuzi ejiri ndị ọzọ. Oringlọ ọrụ.
N'ime ụdị ọrụ akụnụba a, anaghị enwekarị ọganihu mgbe ngwongwo ndị ahụ na-emebi emebi.
Olee otú ọrụ a si arụ ọrụ
Isi ihe dị iche n’etiti ndị na-abụghị ndị na-echeghị echekwa na ịchọpụta ihe bụ na, ọ bụ ezie na n’achụtaghị nrụghachi, ihe a na-eche ihe ọghọm nke ndabara site n’aka onye ahịa ma ọ bụ onye ji ụgwọ ma enweghị ike ime ihe megidere onye kenyere ya ma ọ bụrụ na onye mbufe ya agaghịzi akwụ ụgwọ. Na-ekpebi maka nyocha nke ego gị ma ọ bụ, na ntụle, maka ịjụ ọnọdụ ọ bụla. N'ihi na ọ bụ usoro ego nke bụ ego ọzọ nke kachasị mma maka obere ụlọ ọrụ obere na ọkara. Karịsịa ndị ewepụtara na usoro azụmahịa metụtara azụmahịa kọmputa, n'agbanyeghị ụdị ọdịdị na njikwa ha.
Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa iji mesie ya ike na nke a bụ ọrụ a na-akwalite karịsịa maka usoro azụmahịa nke metụtara ọrụ dijitalụ n'ezie. Iji maa atụ, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ azụmaahịa ụfọdụ ngalaba dị oke mkpa. Site na ebe inwere ike iri uru nke ngwa ahia a site na otutu onodu zuru oke na ndi enweghi uzo ozo ma obu nke mmezi ego.
Uru dị na ego gị
Ngwaahịa a na-enye ndị na-enyocha ya ọtụtụ uru ma anyị ga-anwa ịchịkọta ha site na ihe atụ. Yabụ na n'ụzọ dị otu a, ndị a nwere ike nyochaa ma ego ọrụ ha ọ dị mma site ugbu a gawa yana na ọ bụ otu ebumnuche ha kachasị dị ugbu a. Dịka n'ọnọdụ ndị a, anyị ga-akọwa n'okpuru ha:
Otu n’ime ihe kacha mkpa bụ na anaghị akwụ ụgwọ. Na njedebe nke ụbọchị, ọ bụ ngbanwe nke ikike nnakọta n'etiti ụlọ ọrụ na-ebugharị na ụlọ akụ, yabụ enweghị ụgwọ ọ bụla na oge ọ bụla enyere ọrụ ahụ.
Nchịkọta nchịkọta nchịkọta
Ebe ọ bụ na ọ nweghị ike ịdị obere na nke a, anyị nwere ike ịtụle ịzụ ahịa dịka ọrụ mpụga iji mepụta usoro nchịkọta. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ anaghị etinye ego ọ bụla maka ụdị ọrụ a. Ma yabụ ị nwere ike itinye mbọ gị niile n'ichepụta na ire.
Uru nke ngwaahịa a
Nchịkọta ego-nhazi a na-enye ọtụtụ ndị elele onye ọ bụla goro ya ọrụ, dị ka ndị edepụtara n’okpuru:
Na-ebelata ibu ọrụ nchịkwa ma na-edozi usoro arụmọrụ.
Belata ọrụ ndị isi, nke na-enyere aka nke ukwuu na mbenata na ndutịm, ndị ọrụ na nkwukọrịta.
Ọ na-eme ka ọnụahịa nke akaụntụ ndị ahịa dị mfe, na-abawanye arụmọrụ nke njikwa nchịkọta.
Na-enye ozi oge, nke oge niile na emelitere na ndị ji ụgwọ.
Na-agbanwe arụmọrụ ire azụmaahịa gaa ire ahịa ego.
Zere ihe ize ndụ nke ụgwọ ọjọọ n'ihi ụgwọ ọjọọ.
Ọ na-enye usoro nhazi ego nke ụlọ ọrụ ahụ nnukwu ike.
Ọ na - enye ohere ịhazi atụmatụ ego nke na - eme ka ego na - aga.
Ọ na-eme ka ikike ịkwụ ụgwọ na-abawanye ma meziwanye oke ụgwọ.
Site n'echiche nke azụmahịa, ọ na-eme ka ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ dị mma maka ndị asọmpi na ndị ahịa, na-enye ya ohere ịbawanye ahịa ya.
Esemokwu dị n'etiti ime ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ na ịrụpụta ihe
Kwenye, maka akụkụ ya, bụkwa ihe eji akwado ego, mana na nke a anaghị anabata ebubo ahụ site n'echiche nke ụlọ ọrụ ahụ. Na mpempe, ma ọ bụrụ na factoring bụ ugwo ọrụ na ụlọ ọrụ, ikwenye bụ ugwo ọrụ na ụlọ ọrụ na-eweta.
Factoring bụ ọrụ na-butere iji na-anakọta promissory ndetu; Ọ bụ ezie na ikwenye bụ ọrụ enyere aka iji kwụọ ụgwọ ndị na-ebubata ya, na-achịkọta tebụl gara aga na usoro ndị ọzọ, enwere ike ịsị na:
A na-ekwenye ekwenye maka ebumnuche nke nweta ụlọ ọrụ maka ụlọ ọrụ; mgbe ikwenye na-achọ dị ka ihe mgbaru ọsọ na ndị na-enye ọrụ bụ ndị na-enweta ihe mmiri mmiri.
Na nhazi ihe, ọ bụ ndị ahịa na-ekpebi ịtụ anya akwụkwọ ọnụahịa. Na nkwenye, ọ bụkwa ụlọ ọrụ n'onwe ya na-ekpebi ịkwado ndị na-eweta ya site na ịhapụ ha ohere ịnakọta akwụkwọ ọnụahịa ha tupu oge eruo.
Na mgbakwunye, na ikwenye, nchịkọta akwụkwọ ọnụahịa nke ndị ji ụgwọ kwenyesiri ike yana ikike mkparịta ụka ka mma na ha - ọ dị mfe iru nkwekọrịta na ndị na-eweta ngwaahịa n'ihi na ha ejirila ụgwọ ịkwụ ụgwọ.
Isi ihe ọzọ dị iche n'etiti ịkwado na ikwenye bụ na, agbanyeghị na nke mbụ ụlọ ọrụ ahụ hụrụ ọrụ ya na-egbochi ọrụ nke ụlọ akụ ahụ boro maka ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ, na-ekwenye na enweghị ụgwọ ọ bụla maka ya-ma ọ bụ n'echiche nke inye onyinye akara akwụmụgwọ ma ọ bụ n'echiche nke njikwa nnyefe ego.
Enweghi ike mkpuchi mkpuchi
Otu uru nke ngwaahịa a maka ụlọ ọrụ obere na nke pere mpe bụ nke ahụ metụtara mkpuchi nke ihe ọghọm nke enweghị ike ebe ọ bụ na na-eche 100% mkpuchi nke ihe egwu nke insolvency site na nkewa ndị ahịa. Site na enweghi ego a ghọtara ya: nkwusio nke ịkwụ ụgwọ, enweghị ego, ịdị adị nke enweghị ego nke ndị ji ụgwọ, mmechi ma ọ bụ ịkwụsị ọrụ. N'aka nke ọzọ, mkpuchi ihe ọghọm nke insolvency anaghị atụgharị uche ịgba akwụkwọ na nghọtahie nke ụdị teknụzụ-azụmaahịa.
Ihe ọzọ bara uru kachasị na ya bụ eziokwu bụ na ọ bụ ya na-ahụ maka njikwa nke ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ, na-ewere usoro mbụ iji chọpụta ihe kpatara enweghị iwu na ebufere ya ndị ahịa, ọ bụrụ na ha bụ sitere na nkwekọrịta. N'ụzọ dị otú a, a na-ekenye usoro iji mata ihe kpatara akwụghị ụgwọ yana, ọ bụrụ na ha sitere na insolvency nke onye zụrụ (onye ji ụgwọ) yana mkpuchi nke otu ihe ahụ, a kwadoro ndị na-ahụ maka ịnye ngwaahịa a. nke na-amalite usoro ikpe dị mkpa.
Oringkwụ ụgwọ ihe
Ọrụ ndị a na-enye Ime ihe ha na-anọchite anya ọnụahịa ma ọ bụ ọnụahịa ị ga-egbo ka onye ọrụ nke ọrụ ndị a kwuru; a na-akwụ ụgwọ ahụ n'ụzọ abụọ na-ekpebi ya:
Factgwọ ego maka ọrụ ndozi ụlọ ọrụ ahụ Eziokwu Ọ dị iche dabere na oge ịkwụ ụgwọ maka akwụkwọ ọnụahịa.
Ọnụ ego ọmụrụ nwa, nke a ga-etinye n'ọrụ mgbe ị na-erite uru na usoro nke na-etinye ego n'ihu. Agbanyeghị, ọnụahịa ahụ dịgasị iche dabere n'ọnọdụ ahịa (dabere na ọnwa 3 Euribor tinyere mgbasa, ọnụọgụ ọmụrụ nwa ikpeazụ ka a na-emezigharị kwa ọnwa) yana ihe egwu ndị ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa ego a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Know maara ihe ịzụ ahịa bụ?
Ndụmọdụ 6 iji melite ọrụ ndị ahịa maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị